आदरणीय कमरेडहरू !
कमरेडहरूलाई यस सचिवालय बैठकमा स्वागत गर्दछु ।
हामी एउटा गम्भीर र जटिल मोडमा उभिएका छौं। यो अत्यन्तै छर्लंङ्ग छ र छर्लंङ्ग हुँदै गएको छ। यो निकै जटिल छ। अझ बढी जटिलतम् बन्दै गएको छ। यस स्थितिमा मैले अध्यक्ष हुनुको नाताले र प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले पार्टीको एकता जोगाउने, पार्टी एकीकरणका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले निर्धारण गरेको समयभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने, बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन आफूलाई केन्द्रीत गर्दै त्यसैलाई सफल बनाउन लागिपरेको छु। र, म हरतरहले त्यही कर्तव्य पूरा गर्ने प्रयासमा लाग्नु आफ्नो जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेको छु।
कात्तिक २८ गते ‘प्रस्ताव’ को नाममा मलाई समेत दिइएको र वितरण गरिएको जुन अत्यन्तै दुश्मनीपूर्ण लिखत छ, त्यो पढेर म आश्चर्यचकित भएको छु। दुःखित पनि भएको छु । त्यस लिखतको सम्बन्धमा म त्यसै भाषामा, त्यसै शैलीमा त्यसैगरी मैदानमा उत्रिन त नसकुलाँ, म त्यसो गर्न चाहन्नँ नै। त्यसमा धेरै शीर्ष नेताहरूको बुद्धि, सीप, अनुभव मिसिएको छ भन्ने अस्ति ३ गते कमरेड प्रचण्डले राख्नु भएपछि मलाई थाहा भयो। ‘मेरो मात्रै होइन, अरु साथीहरूका पनि अनुभवहरू, बुद्धिहरू र हर्कतहरू यसमा मिसिएका छन्, यो एकल होइन’ भनेपछि त्यो जानकारी प्राप्त भयो। ती आरोपहरू कुनै आवेग उत्तेजनामा लगाइएका होइन रहेछन् ! सोची सम्झिकन मेराविरुद्ध लाञ्चना लगाएर मलाई राजनीतिक रूपले बदनाम गर्ने र सिध्याउने उद्देश्यका साथ लिखत आएको रहेछ। त्यो कमिटीमा छलफलमा आएको छैन र छलफलमा आउन लायक पनि छैन। त्यसलाई कमिटीको कुनै राजनीतिक प्रस्ताव वा प्रस्तावको रूपमा स्वीकार गर्न, त्यसमा बहस गर्न वा छलफल गर्न सकिँदैन र मिल्दैन । सकिँदैन पनि, मिल्दैन पनि। त्यो नितान्त लाञ्छनाको पुलिन्दा हो । त्यो झुटको पुलिन्दा हो । मैले त्यसलाई जवाफ नदिए पनि हुन्थ्यो, संक्षिप्त जवाफमा एकमुष्टढंगले त्यसलाई खारेज गर्दा पनि हुन्थ्यो । मैले अस्तिको बैठकमा भनिसकेको छु, त्यसलाई म अस्वीकार गर्दछु, झुठको पुलिन्दा हो र त्यसलाई अस्वीकार मात्रै होइन, खारेज नै गर्छु । यो कुरा मैले मंसिर ३ गतेको बैठकमा नै भनिसकेको छु।
मैले कमिटीका निर्णय मान्दिनँ भनेको होइन। तर, एकता गरिरहँदा, एकताको बाटोतर्फ अघि बढिरहँदा हामीले शक्तिको हिसाब गरेनौं, सामथ्र्यको हिसाब गरेनौं । केही पनि हिसाब नगरिकन एकताको भावनाका साथ म आफैँले निर्णय गर्दा, म आफैँ अल्पमतमा पर्नेगरी मैले कमिटीहरूको निर्माण गरेको थिएँ। अल्पमतमा पर्ने नै गरी एकता गरेको थिएँ। पूर्व एमालेभित्रको स्थिति पनि हामी सबैलाई थाहा थियो र फेरि पूर्व माओवादी केन्द्रलाई दिइएको संख्यासमेत जोड्दा के हुन्छ ? त्यो पनि थाहा थियो र थाहा छ। एकतातर्फ जाँदाखेरी, एकताको भावनाका साथ जाँदाखेरी त्यस्तो संख्याले केही पनि बिगार्दैन। त्यो संख्या एकताको भावनाका साथ अगाडि बढ्नका लागि सबैमा एउटा उत्साह र समानताको भाव, सम्मानको भाव र हामी साझा कर्तव्यमा केन्द्रित भएर, साझा उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, साझा लक्ष्य जम्मा गर्न अगाडि बढ्दै छौं भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिलेका कमिटीहरू मनोनयन गरिएका थिए। यी कुनै अधिवेशन, महाधिवेशन वा सम्मेलनबाट बनेका निर्वाचित कमिटीहरू होइनन् र अहिले कसैले बहुमत र अल्पमतको कुरा गर्दाखेरी कोही आफ्नो अलोकप्रियताले अल्पमतमा वा कोही लोकप्रियताले बहुमतमा गएको स्थिति पनि होइन। त्यही हो भने चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गरौं भनेर हामीले भनेका छौं, गछौं भनेका छौं र महाधिवेशन गरौं। लोकप्रियता त्यहाँ प्रकट हुन्छ नि ! बहुमत को हो ? अल्पमत को हो ? त्यो गरे भइगो। तर, यसबीचमा जसरी एकता भाड्ने खालका प्रयासहरू भए, एकताका लागि गरिएको संगठनात्मक र संख्यात्मक प्रबन्धलाई लत्याएर ‘कू’ का प्रयासहरूको निम्ति दुरूपयोग गर्ने र एकता बिथोल्ने खालका अबाञ्छित प्रयासहरू भएका छन् । यी अवाञ्छित प्रयासहरू कुनै पनि स्थितिमा सह्य र ग्राह्य हुँदैनन्। म फेरि पनि कमरेडहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यी कुनै पनि हिसाबले सह्य, ग्राह्य र मान्य हुँदैनन्।
कमरेडहरूले त्यागको कुरा गर्नुभएको छ। त्याग क–कसले गर्नुपर्ने हो ? म एक पटक अध्यक्ष भएको छु, निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित हिसाबले नै अध्यक्ष भएको हुँ । निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा नै हो, नत्र भने अरु बाटा थिएनन्। त्यही निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतमा वार्ता गरेको हुँ, एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ र दुई अध्यक्षको प्रबन्ध गरेर एक अध्यक्ष भएको हुँ। यो सब त्यही पृष्ठभूमिमा हो। अरु दावी गर्ने साथीहरू त कमसेकम १३-१४ वर्ष, १५-१६ वर्ष र ३२-३३ वर्ष पार्टी प्रमुख भएर चलाउनु नै भएको होला ! उहाँहरूले त्याग गर्नु नपर्ने ? लोकप्रियताको पनि बहुतै कुरा चल्यो। ठीकै छ, भोलि चुनावहरू पनि आउँछन्, जनता र कार्यकर्ताले जाँचून हाम्रो लोकप्रियता, के भएको छ र ? हेरौं। जाँचौंला। महाधिवेशनहरू, अधिवेशनहरू हुन्छन्, जाँचौंला। ठीक छ नि ! बीचमा हतार किन गर्ने र ? ‘कू’ को शैलीमा एकता–एकीकरणको बाटो छाडेर सत्तापलट अथवा कब्जा, यस्ता अनुचित बाटोबाट कब्जा गर्ने तरिका अपनाउने ? के यी कामहरूले हामीलाई एकताको बिन्दुमा पु¥याउँछन् ? हामीले हिजो सहमतिका साथ महाधिवेशनसम्म जाने, एकता एकीकरणका काम तीन महिनाभित्र टुंग्याउने र दुई वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने भनेको होइन ? महाधिवेशन गर्दा पनि सहमतिका साथ महाधिवेशन गर्ने भनेको होइन ? ती कुरा हामीले हाम्रो वैधानिक व्यवस्थामा पनि समावेश गरेका होइनौं ? अब यस स्थितिमा बहुमत र अल्पमत भन्न खोज्नु भनेको यो जालझेल र षडयन्त्रको कुरा मात्रै हो। यो ‘कू’ को कुरा हो र यो फाटोतर्फको यात्राको ‘प्रस्ताव’ हो। त्यसकारण फाटोतर्फको यात्राको ‘प्रस्ताव’ लाई अस्वीकार गर्दै म अझै पनि एकतातर्फ जाऔं भन्ने आग्रह साथीहरूलाई गर्न चाहन्छु। मैले भनेको छु, महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आई अरु साथीहरूले सञ्चालन गर्नुस्, मलाई इच्छा छैन र रहर छैन। मैले अर्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीमा पनि मेरो इच्छा छैन भनेको छु। अहिलेको सञ्चालनको सन्दर्भमा पनि सहमतिका साथ, परामर्शका साथ अगाडि जाऔं भनेको छु। मलाई आज बिहानको त धेरै जानकारी छैन, हिजोसम्मका गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी छ। बाहिर शब्द एक खालका छन्, भित्र गतिविधि विल्कूलै विनाशकारी छ, विखण्डनकारी छ, देश र जनताप्रति गम्भीर धोका दिने प्रकृतिको छ। यसमा म के मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामी त नेपालका ‘भाग्यमानीहरू’ भित्र पर्छौं। हामी आफैं खानलाउन पाएका, घर भएका वा घर नभए पनि घरभेटीको घरमा बस्न पाएका, नातागोता आफन्तको पनि कमसेकम बेडा पार लगाएकाहरू नै छौं। तसर्थः ‘भाग्यमानी’ छौं ! कमसेकम यति भइसकेपछि त हामीले देशको बारेमा अलिकति सोच्ने गरौं । जनताको बारेमा पनि अलिकति सोच्ने गरौं । कोभिड–१९ को महामारीका बारेमा पनि अलिकति त सोच्ने गरौं ! गरिबी कसरी हटाउने ? अशिक्षा कसरी हटाउने ? पछौटेपन कसरी हटाउने ? जनताका समस्या कसरी हटाउने ? त्यस बारेमा पनि सोच्ने गरौं । त्यतापट्टि पनि हाम्रो थोरै ध्यान मनदेखि नै जाने काम होस् । तर, हामी बहुतै चतुर खेलाडी निस्कियौं । शब्द एक प्रकारको र व्यवहार अर्कै प्रकारको ! अर्थात्, एक खालको शब्द, अर्को खालको व्यवहार गरेर चकित पारिरहेका छौं !
पार्टी एकीकरणका कामहरूलाई बीचैमा अलपत्र छाडेर, महाधिवेशनको आयोजना गर्ने, आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि लैजाने अभिभाराबाट पर हटेर फुटको खेतीतर्फका प्रयाशहरू गरेर जाने कुरालाई मैले स्वीकार्न मिल्दैन । म आफ्नो यो अस्वीकारोक्ति यहाँ स्पष्ट गर्छु। र, यही अस्वीकारोक्तिका साथ मैले जुन प्रस्ताव तयार गरेको छु, त्यसलाई विधिसम्मत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । अहिलेलाई यत्ति नै।